Arjantiina - Gpedia, Your Encyclopedia
"Astaanta Qaranka Arjantiina"
Caasimada Buenos Aires
- Taakiikh 9 Julaay, 1816
- Total 2,766,890 km2 km²
- 2017 qiyaas 44,044,811
- Total $0.685 billion 
- Per capita $12,550
Argentina (Sannadkan wuxuu maqlaa codkani; Spanish: [aɾxentina]), si rasmi ah dalka Argentine [A] (Isbaanish: República Argentina), waa Jamhuuriyadda Federaalka ee inta badan ku taal qaybta koonfureed ee Koonfurta Ameerika. Wadaagidda qadarka Koonfureed ee Chile ee galbeedka, waddanka ayaa sidoo kale xuduud u leh Bolivia iyo Paraguay dhanka woqooyiga, Brazil oo waqooyi-bari, Uruguay iyo Koonfur Atlantic oo ku yaal bariga, iyo Khadka Dhexe ee Drake ee koonfurta. Argentina waxaa ku yaala wadanka sideedaad ee ugu weyn adduunka, kan labaad ee ugu weyn Latin America, iyo kan ugu weyn ee Isbaanishka ku hadla. Buenos Aires, oo ah caasimada federaalka ah ee dalka (Isbaanishaan: Capital Federal) sida uu go'aamiyey Congresska . Gobolada iyo caasimadu waxay leeyihiin dastuur u gaar ah, laakiin waxay ku jiraan nidaam federaali ah. Argentina waxay sheegataa madax banaanida qayb ka mid ah Antarctica, Falkland Islands (Isbaanish: Islas Malvinas), iyo Koonfurta Georgia iyo Koonfurta Sandwich Islands.
Joogista ugu horreysa ee bini'aadamka ee taariikhda Argentina ee taariikhda casriga ah waxay dib ugu noqotaa muddada Paleolithic.  Waddanku wuxuu leeyahay xididdadiisa kuxirta Isbaanishka ee gobolka ee qarnigii 16aad.  Argentina waxay noqotay mid ku guulaysatay gobolka Viceroyalty ee Río de la Plata,  Spanish-ka dibad-baxa dibada ee lagu aasaasay 1776-kii. Baaqa iyo dagaalka xornimada (1810-1818) waxaa soo raacay dagaal sokeeye oo soconayey ilaa 1861, taas oo ku dhamaatay dib-u-habeynta dalka sida federaalka ah ee gobollada Buenos Aires oo ah caasimadeeda. Waddanku wuxuu intaas ku daray in nabadgelyo iyo xasilooni darro, iyada oo mowjado waawayn oo ka mid ah soogalootiga yurubiyaanka ah ay si xooggan dib-u-habaynayaan aragtida dhaqameed iyo bulsho. Kororka ku soo kordhay barwaaqada ayaa keentay in Argentina ay noqoto dalka 7aad ee ugu faqiirsan adduunka tan iyo qarnigii 20-aad  
Template:Country data Buenos Aires
Template:Country data Córdoba Córdoba
Template:Country data Santa Fe Rosario
Template:Country data Mendoza Mendoza
Template:Country data Tucumán Tucumán
Template:Country data Buenos Aires Province La Plata
Template:Country data Buenos Aires Province Mar del Plata
Template:Country data Salta Salta
Template:Country data Chaco Resistencia
Template:Country data Santiago del Estero Santiago del Estero
Arjantiina ama jamhuuriyadda Arjantiina (Isbanish República Argentina. Waa wadan ku yaalo qaarada Koonfur ameerika.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Arjantiina&oldid=182231"